Daawo Sawirrada madaxweynaha Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay Riyadh – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xassan Sheekh Maxamuud oo safar deg deg ah uga soo ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa caawa soo gaaray magaalada Riyadh ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo uu safarkiisu ku qotomay geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Boqor Cabdalla Bin C/casiis oo ahaa amiirkii dalka Sucuudiga.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay wehliyaan Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya ayaa halkaasi kaga tacsiyeynaya dadka iyo mas’uuliyiinta Sacuudi geerida ku timid Allaha u naxariistee Boqorka Dalkaasi.
Madaxweynaha ayaa la kulmi doona madaxda ugu sareysa wadanka Sucuudiga inta uu ku suganyahay dalkan.
Aaska Boqorka ayaa ka billowday magaalada Riyadh, iyadoo goor-dhowayd naxashka lagu sido meydkiisa la geeyay masaajidka Imaam Turki, halkaasoo salaada janaasada lagula tukaday kadibna lagu aasay.
Madaxda ka qaybgalaya aaska boqorka ayaa waxaa ka mida ah; Cumar Al-bashiir oo ah madaxweynaha Sudan iyo boqorka Urdun, iyadoo sidoo kalena ay ka qaybgalayaan madax kale oo ka socda dalalka reer galbeedka.
Geerida boqor Cabdalla ayaa dib u dhigtay safar uu maanta oo Jimco ah ku imaan lahaa Muqdisho madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan,
Buuhoodle: Hoos u dhac ku yimid adeegyada caafimaadka